होमपेज / स्वास्थ्य / घाँटी दुखाइले बालबालिकामा बाथ मुटुरोग
घाँटी दुखाइले बालबालिकामा बाथ मुटुरोग	07 May 2013 | 10:46am मङ्गलबार २४ बैशाख, २०७०
काठमाडौं- स्कुल जाने उमेरका बालबालिकामा दोहोरिरहने ज्वरो र घाँटीको दुखाइमा ख्याल गर्नुपर्छ। बारम्बार दोहोरिने टन्सिलाइटिस वा फ्यारिन्जाइटिसले बाथ ज्वरो र बाथ मुटु रोग निम्त्याउँछ। घाँटीको सामान्य इन्फेक्सनबाट सुरु हुने बाथ ज्वरोबाट बाथ मुटुरोग भएर जीवनभर उपचार वा मृत्युकै कारण बन्नसक्ने मुटुरोग विशेषज्ञ डा.प्रकाशराज रेग्मी बताउँछन्। चिसो र गुम्सिएको ठाउँमा बस्नेलाई बाथज्वरोले आक्रमण गर्छ। त्यसैले बालबालिकाको कक्षाकोठा घाम पस्ने र हावा राम्रोसँग खेल्ने किसिमको हुनुपर्छ।
३ देखि १५ वर्ष उमेरमा बारम्बर घाँटी दुखेमा दुखेको एक देखि चार सातापछि एक किसिमको ज्वरो आउन सक्छ। यसरी ज्वरो आउँदा एकपछि अर्कोगरी हातखुट्टा र जोर्नी दुख्ने र सुन्निने हुन्छ। चिकित्सकिय भाषामा यस्तोेलाई बाथ ज्वरो भनिन्छ।'बाथ ज्वरो आएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी केटाकेटीमा पछि गएर मुटुका भल्भ खराब हुने रोग लाग्छ,' डा.रेग्मीले भने। बी हेमोलिइटिक स्टेप्टोकोकस ए नामक किटाणुको संक्रमण भएर सुरु घाँटी दुुख्ने, ज्वरो आउने, ५ देखि ७ दिनमा घाँटी दुखेको ठीक हुने, यसको एक देखि चार हप्तापछि फेरी ज्वरो फर्किने हुन्छ। तर ज्वरो फर्किएर आउँदा साथमा जोर्नी दुख्ने समस्या पनि थपिन्छ।जोर्नी पनि दुख्ने र सुन्निने व्यथालाई बाथ ज्वरो भनिन्छ। सामान्यतः यस्तो संक्रमणले चिसो र हावा नचल्ने कक्षाकोठा एवं बासस्थानमा बस्नेमा घाँटी संक्रमणको खतरा हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार यस्तो भाइरस संक्रमण भएको तीन प्रतिशतमा बाथ ज्वरो र बाथ ज्वरो भएकामध्ये ५० प्रतिशतमा मुटुको भल्भ खराब हुन्छ।विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति एक लाख बालबालिकामध्ये सय जना यस रोगबाट पीडित छन् भने दश प्रतिशत मृत्युको कारण यही समस्या हो। नेपालमा एक लाख बालबालिकामा प्रति वर्ष ३ सय देखि ५ सय जनासम्म यसबाट पीडित हुने गरेका छन्। युवा र वयस्कको समेत तथ्यांक हेर्ने हो भने अत्यन्तै ठूलो छ।बाथका कारण क्षतिग्रस्त मुटु लिएर कष्टप्रद जीवन यापन गरिरहेकाहरूको संख्या त्योभन्दा निकै ठूलो छ।कसरी चिन्ने बाथ ज्वरो?गंगालाल हृदय रोग केन्द्रका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. यादवदेव भट्टका अनुसार बाथ ज्वरो हुँदा सुरुमा घाँटी दुख्ने र ज्वरो आउने हुन्छ। यस्तो समस्या ५ देखि ६ दिनभित्र आफैं ठीक हुन्छ। 'यो समस्या एकदेखि चार साताभित्र ज्वरो बल्भि्कएर आउँछ। ज्वरो जति धेरैपटक बल्भि्कँदै जान्छ, स्थान परिवर्तन गर्दै घुँडा, कुर्कुच्चा, कुहिना र नाडीका जोर्नी सुन्निने र दुख्ने हुन्छ। यसको असर मुटुमा पर्छ। यसको आक्रमण बढ्दै जाँदा मुटुका भल्भ सुन्निने, खुकुलो वा साँगुरो हुने, मुटु नै सुन्निने हुन्छ। मुटु हल्लिने र दम बढ्ने समस्या थपिन्छ।डा. रेग्मीका अनुसार कसैकसैलाई कुहिना, घँुडा, नलीखुट्टा जस्ता ठाउँमा छालामुनि स–साना केराउका दानाजस्ता डल्ला देखा पर्छन्। 'यस्ता डल्ला अल्पकालीन र बढीमा एक वर्षसम्म पनि रहने हुन्छ। कसैलाई पेट वा ढाडमा नचिलाउने बीचमा सेतो र वरीपरि रातो चक्का भएको डाबर पनि देखिन सक्छ,' उनले भने।उपचार र रोकथामडा. रेग्मीका अनुसार बालबालिकामा घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने समस्या भए समयमै उपचार गर्नु पर्छ। बाथ ज्वरो उत्पन्न हुने सम्भावनालाई रोक्नु नै बचावटको प्रमुख उपचार हो। त्यसबाहेक घाँटीको इन्फेक्सन ठिक पार्न सके बाथ ज्वरो उत्पन्न हुने सम्भावना कम हुन्छ। घाँटीको इन्फेक्सन समयमै उपचार गरे ९० प्रतिशत भन्दा बढी जोखिम घटाउन सकिन्छ।घाँटी दुखाइको कारण पत्ता लगाएर पेन्सिलिन सुई वा एन्टिबायोटिक्स सेवन गरेमा रोगबाट बच्न सकिन्छ। चिकित्सकले बाथ ज्वरो पहिचान गरेपछि त्यसलाई फर्किन नदिन शरीरमा एक महिनासम्म असर रहिरहने सुई प्रयोग गर्छन्। जोखिम हेरिकन यो सुई ५ वर्षदेखि १८ वर्ष नपुग्दासम्म र मुटुको समस्या भइसकेको अवस्थामा ३५ वर्षसम्म पनि लगाइरहनुपर्छ।बाथको प्राथमिक उपचारका लागि घाँटी दुखेको समय एकपटक सुई लगाए पुग्छ। तर, बाथ ज्वरो लागिसकेपछि द्वितीय रोकथामका लागि प्रत्येक तीन हप्तामा लामो समयसम्म यो सुई लगाई राख्नुपर्छ। रोगले मुटुको भल्भ साँघुरो पारेमा खुकुलो पार्न शल्याक्रिया नै आवश्यक पर्छ। र भल्व बिग्रिएमा कृतिम भल्ब राख्नुपर्छ।शल्यक्रियापछि पनि रगत पातलो गराउने औषधि खानुपर्छ। 'औषधीको मात्रा बढी भएमा रगत बढी पातलो भइ दाँत माफ्दा र घाउ हुँदा पनि बढी रगत जानसक्छ', डा.रेग्मीले भने, 'बाक्लो भएर थेग्रा जम्मा भएर पक्षघात हुनसक्छ।'खासगरी चिसो र गुम्सिएको ठाउँमा बस्ने बालबालिकालाई बाथज्वरोले बढी मात्रामा आक्रमण गर्छ। त्यसैले कक्षा कोठा घाम पस्ने र हावा राम्रोसँग खेल्ने किसिमको बनाउन डा.रेग्मीको सुझाव छ। एउटै कोठामा धेरै विद्यार्थी पढाउनाले पनि रोगको जोखिम बढ्छ।रोगको जोखिमबाथ ज्वरोको नराम्रो असर मुटु सुन्निने हो। यसले मुटुको बाहिरी, भित्री र मध्यगरी तीनै पत्र सुन्निन्छ। पछि मुटका भल्भ बिगिएर साँघुरिने वा चुहिने, मांसपेशी कमजोर भएर मुटुले राम्ररी खुम्चिने र फैलने गर्न नसकि काम गर्न छोड्न सक्छ।'बिग्रेको भल्भबाट रगत सञ्चालन हुन गाह्रो भएर मुटु सुन्निने र कामै गर्न नसक्ने भएर जीवनभरका लागि स्वाँस्वाँ आउने हातगोडा फुल्ने हुन्छ,' डा.रेग्मीले थपे, 'मुटु सुन्निएका बिरामीलाई मुटु बढी ढुकढुक गर्ने र दम बढ्ने हुन्छ। रोगले जोर्नीलाई चाट्छ र मुटुलाई टोक्छ। जोर्नीहरु बिग्रदैनन्,आफैं ठीक भएर जान्छन तर, मुटुको भल्भ सदाका लागि नष्ट भएर जान्छन्।' Tweet प्रतिक्रिया